I-iPhone 13 iya kuba namandla aphezulu kwi-512GB | IPhone iindaba
I-iPhone 13 iya kuba nesikhundla esiphezulu se-512GB
NgokukaTrendForce, iimodeli ezintsha ze-iPhone 13 eziza kuphehlelelwa ngu-Apple ngoSeptemba olandelayo iya kufikelela kwi-512 GB yokugcina kwangaphakathi. Inkampani yophando yaseTaiwan ilumkisa ukuba inkampani yaseCupertino iceba ukumilisela iimodeli ezintsha ze-iPhone ngoSeptemba olandelayo, yongeza i-iPhone mini, i-iPhone kunye neemodeli ezimbini ze-iPhone Pro njengoko i-iPhone 12 inamhlanje.
Kodwa ngaphaya kokuhlala kuloo nto, ichaza ntoni iTrendForce kunye neminye imithombo yeendaba enje MacRumors, kukuba ezi modeli zintsha ze-iPhone ziya kongeza inotshi encinci, ziya kuthi zibandakanye ifayile ye- Iiprosesa zesizukulwana esilandelayo se-A15 ezenziwe ngenkqubo ye-nanometer ye-5 Kwaye iimodeli zepro ziya kongeza ngokusesikweni i-120Hz yokuhlaziya inqanaba lokubonisa kwabo.
Kukho amarhe aliqela acebisa ukuba imodeli elandelayo ye-iPhone izakuzisa utshintsho oluncinci xa kuthelekiswa nemodeli yangoku, kodwa ezinye ziye zahluka kwezinye izixhobo eziphathwayo ezisungulwe ukuza kuthi ga ngoku yinkampani yeCupertino.
Isikena seLiDAR kubonakala ngathi siyakuhlala sodwa kwiimodeli zePro kwesi sizukulwana silandelayo kwaye akukho meko banokuthi bandise ubuninzi besikhundla esele sinayo i-iPhone 12 yangoku, i-512 GB. Kwiimodeli ezintsha zePro ezivela kolu lwimi bakwathi iilensi ezibanzi ze-Ultra ziya kongeza ukugxila okuzenzekelayo kwaye kucingelwa ukuba kungaphaya kwezinto ezintsha kulindeleke ukuba Imveliso yonyaka ye-iPhones ye-2021 ikhula malunga ne-12,3% ngaphezulu konyaka ukufikelela kwiiyunithi ezingama-223 ezigidi ezenziwe. Elona nani liphezulu liqwalasele imeko yobhubhane esihlangabezana nayo ngoku.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » Iifowuni zePhone » iPhone 13 » I-iPhone 13 iya kuba nesikhundla esiphezulu se-512GB
I-iPhone 13 inokuoyikisa ukuthengisa ngenxa yegama layo
Ungazifumana njani izitikha zeWhatsApp